Wasiirka arrimaha gudaha oo amar ku bixiyay in la soo xiro dadkii qalalaasaha abuuray maalintii jamhuri Day – The Voice of Northeastern Kenya
Wasiirka arrimaha gudaha oo amar ku bixiyay in la soo xiro dadkii qalalaasaha abuuray maalintii jamhuri Day
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani Kenya Joseph Nkaissery ayaa dhamaan guddoomiyash acountiyad amar ku siiyay in ay xabsiga u taxabaan cid kasta oo qalalaasa abuuray maalintii la xusayay munasabadii Jamhuri Day.
Sido kale wuxuu amar ku bixiyay in gacanta lagu soo dhigo siyaasi ama tageeradoodii khalkhal geliyay doorashooyinkii xisbiga Jubilee oo maalintii arbacada la qabtay.
Mr.Nkaissery ayaa intaas ku daray in tallabo sharciga waafaqsan laga qaadayo cid kasta oo lagu cadeeyo in ay rabshadaha ku lug lahayd.
Dhanka kale gudiga madaxa banaan ee doorshooyinka iyo xuduudada ee IEBC ayuu amar ku siiyay in siyaasi kasta oo jeedinaya hadalada naceybka abuuro uu ka hor istaago ijn uu ka qeyb qaato doorshada guud ee la filayo in ay dalka ka dhacda bisha 8-ad ee sanadka soo socdo.
Isaga oo ka hadlaya saameeynta ka dhalan karto rabshadaha ayuu yiri ma rabno in mar kale uu dalka ka dhaco qalalaasihii dhamaadkii sanadkii 2007-dii iyo horaantii 2008-dii .
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sido kale kenyaanka uga digay qoralada ay soo dhigayaan baraha bulshada oo ku aadan ololaha siyaasadeed isaga oo xusay in dowlada ay soo iibsatay qalab lagula soconayo fariimahaasi.
← Dowlada dalka DRC oo amar ku bixisay in xayirad la saaro isticmaalka baraha bulshada
Kenya oo lagu amaanay la tacaalidda cudurka duumada →